गणतन्त्र नेपालमा मोदीलाई दरबारिया सम्मान ! - गणतन्त्र नेपालमा मोदीलाई दरबारिया सम्मान !
गणतन्त्र नेपालमा मोदीलाई दरबारिया सम्मान !
२०७५, १५ भदौ, 03:00:30 PM
काठमाडौं । स्वदेश फर्कनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिमा फिल्मी शैलीको प्रकृयामा स्वागत गरिएको छ । पशुपतिस्थित धर्मशालाको उद्घाटनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी शुक्रबार साझ पशुपतिको दर्शन गरेर स्वदेश फर्केका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रभीष कुमारले स्वदेश फर्किनुअघि मोदीले पशुपतिको दर्शन गरेको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फट जानकारी दिएका हुन्। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ‘बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग बिहीबार नेपाल आएका उनी आजै साँझ स्वदेश फर्किएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बिदाइ गरेका थिए ।
भारतीय सिमा नाका कंञ्चनपुरको गैडाचोकी र बाँकेको रुपैडियामा काम गरेर फर्केका नेपालीहरु सिमा नाकामै पिटिने र लुटिने गर्दै आएका छन् । तेसो त मोदी आएकै दिनमा पनि सिमानाकामा नेपाली नागरिक लुटिएका छन् ।
भारतले पटकपटक सिमा नाका यो व्यवहार देखाइ रहँदा नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भो अझै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिदै उनलाई अकंमाल गरेर बिदाई गरेका छन् ।
आजै पशुपतिमा आरतीको समयमा सर्वसाधारण प्रवेश निषेध गरेर मोदीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा दरबारिया सम्मान गरिएको छ । हिजो मात्रै मोदी नेपाल आउदा नेपालभरकै उडानदेखि यातायात प्रभावित हुँदा सर्वसाधारण सास्ती भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
दरबारिया शैलीमा विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्नु गणतान्त्रिक नेपालमा कत्ति उपयुक्त हो ? हेलिकप्टर आकाशमा उडाएर पाहुनालाई धर्तीमा गुडाउनु नै अधिक सुरक्षा हो र ? सडक खुल्ला राखेर पाहुनालाई सत्कार गर्ने नाममा आम सर्वसाधारणलाई सडकमा थुन्नु कत्ति उपयुक्त ? प्रश्नहरु धेरै छन् । हामीले यसरी प्रश्नहरु उठाइ रहँदा विशिष्टहरुको सुरक्षालाई विशेष ध्यान नदिनु भनेको होइन् । बस् आम नागरिकले यो सास्ती कहिले सम्म झेल्ने ?
नेपाल सरकारले कुनै पनि बहानामा सार्वभौम नागरिकलाई गरेको यो व्यवहार उचित छैन । यो सरकारले अब विदेशी पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्ने, सवारी गराउने लगायतका बहानामा जनताका मौलिक अधिकार नै हनन् हुने यस्ता गतिविधी नगर्दा उचित हुन्छ । जनचाहानाको सम्मान गर्दै पाहुनाको सत्कार शैली परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । आम जनचाहाना पनि यहि हो ।
आज महाशिवरात्री, पशुपतिलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको भीड